निक्की बेला भन्छिन् कि आर्टेमबाट स engage्लग्नता घण्टीको एउटा ठूलो त्रुटि छ - सेलेब्स
मुख्य सेलेब्स मनोरञ्जन समाचार ब्लग
निक्की बेलाले आर्टेम चिग्विन्त्सेबाट उनको संलग्नता औंठी पत्ता लगाउँछिन् जुन ठूलो त्रुटि थियो
निक्की बेला मंगेतर आर्टेम चिग्विन्त्सेको उनको सगाईको औंठीसँग पूर्ण रूपले खुसी छैन, उनले आफू ठूलो परिवर्तन गर्ने भइन्।
भूतपूर्व डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टारले उनको २ Jan जनवरीको भिडियोमा उनको ठुलो नयाँ बिलि। फ्ल्यान्ट गर्यो बेला ट्विन्स यूट्यूब च्यानल , उनको बहिनी, ब्री बेला संग कुराकानीमा व्याख्या गर्दा कि यो एक प्रमुख त्रुटि छ।
'त्यसोभए मैले अन्ततः मेरो जिंगी फिर्ता पाएँ [ज्वेलरबाट] तर तपाईंलाई कस्तो पागल हो भनेर थाहा छ उनीहरूले मलाई चाहिएको सानो फिक्सहरू ठीक गरेनन्, त्यसैले यो अझै ठुलो छ,' उनले भनिन्, 'चम्किरहेर। 'यो आकारको छैन र मैले चाहेको जस्तै उनीहरूले गर्न सकेनन, त्यसैले म यो नयाँ सेटिंग एक वा दुई महिनामा पाउँदैछु। हामी विचार गर्ने छौँ। म फेरि आउनेछु र तपाईंलाई देखाउनेछु। तर म तपाईलाई देखाउन चाहान्छु [अब] मेरो औँठी कती सुन्दर छ। '
'गरीब आर्टम,' ब्रीले जवाफ दिए।
'मलाई यो धेरै मन पर्छ,' निक्कीले भनिन्।
'उसले पसिना पसीरहेको थियो जब उसले यो एउटा कि्यो र अब उनी आफैंले जाँदैछिन्' यसलाई रिसेट गर्नुहोस्, 'ब्रीले भने।
एक बच्चाको रूपमा heidi क्लाम
'जे भए पनि, म तपाईंलाई यो कथा रिसेट भए पछि भन्नेछु। यो अन्ततः मेरो औंठी लगाउन सक्षम हुनु राम्रो लाग्दछ। यो धेरै राम्रो छ। यो ह्यारी विन्स्टन डिजाइनको जस्तो छ, कसरी ह्यारी विन्स्टनले उनीहरूको सबै क्लासिक घण्टीहरू गर्छ र, तपाइँ मलाई चिन्नुहुन्छ, म धेरै क्लासिक र पुरानो हलिउड प्रकारको छु, त्यसैले मलाई यो मनपर्दछ, 'दुलही-देखि-हुनकी निष्कर्षमा।
२०२० को लागि उत्साहित र अर्को दशक तपाईसँग @theartemc ️ मैले नोभेम्बरमा फ्रान्समा हो भने! हामी यसलाई गोप्य राख्न प्रयास गर्दैछौं तर वास्तवमै नयाँ वर्षको लागि हाम्रो उत्साह साझेदारी गर्न चाहान्छौं!
द्वारा पोष्ट गरिएको साझेदारी निक्की बेला (@thenikkibella) जनवरी,, २०२० PST
निक्की र आर्टमको नोभेम्बर २०१ in मा स engaged्लग्न भएको थियो तर जनवरी २०२० सम्म पर्खिए समाचार साझा गर्न।
एमी शुमर, क्रिस फिशर फूड नेटवर्क प्रीमियर अघि जीनको पहिलो जन्मदिन मनाउँछन्
ला ला र Carmelo एन्थोनी अलग गरिएको छ: रिपोर्ट
ज्याक ओस्बोर्न सम्बन्धविच्छेद भइरहेको छ
ताराजी पी। हेन्सन विवाहित
विकासकर्ता गेरी एन्डरसन फ्लिप वा फ्लप
निकले सोफिया भर्गारासँग विवाह गरी
बेथेनी फ्रेंकल प्रेमी डेनिस ढाल
जिम पार्सन र टोड स्पाइकक विवाहित